Dhibaatada Suuqa Kala Iibsiga Ee Chelsea Oo Halkeeda Ka Sii Socota Iyo Juventus Oo Markale Soo Diiday Dalab Aan Abid Difaac Laga Gudbin Oo Ay Blues Ku – WWW.Gool24.net
Dhibaatada Suuqa Kala Iibsiga Ee Chelsea Oo Halkeeda Ka Sii Socota Iyo Juventus Oo Markale Soo Diiday Dalab Aan Abid Difaac Laga Gudbin Oo Ay Blues Ku
July 15, 2017 Mahamoud Batalaale
Xaalada suuqa kala iibsiga ee kooxda Chelsea ayaan xagaagan u socon sidii uu Antonio Conte qorshaystay waxaana jira dhibaatooyin badan oo isbiirsaday. Antonio Conte ayaa markii uu xili ciyaareedku soo dhamaaday waxa uu diyaar saday qorsha suuqa kala iibsiga isaga oo kooxdiisa u sheegay bartilmaameedyada uu suuqa ka doonayay balse qorshahaas ayaan noqon mid u dhacay sidii uu doonayay.
Ugu horayn Antonio Conte ayaa Manchester United u waayay saxiixa Romelu Lukaku oo bartilmaameedka kowaad u ahaa sidoo kale waxa uu Leonardo Bonucci u waayay kooxda AC Milan isaga oo si wayn u doonayay in difaacii hore ee Juventus uu Stamford Bridge keensato. Juventus oo hore Blues uga soo diiday dalab 60 milyan oo gini ahaa oo ay ku doonaysay saxiixa Alex Sandro ayaa markale soo diiday dalab 61 milyan gini ah.
Laakiin markale Antonio Conte ayaa u muuqda in uu waayi doono saxiixa difaaca ree Brazil ee Alex Sandro kaas oo isna u ahaa bartilmaameed muhiim ah waxayna hadda Chelsea u muuqataa mid quus ka taagan saxiixa difaaca Juventus ee Ales Sandro kadib markii ay kooxda ree Talyaani oo iyaduba dhibaato dhexda kaga jirtaa ay soo diiday dalab 61 milyan oo gini ah waana lacag 70 milyan oo euros ku dhaw.
In Dani Alves iyo Leonardo Bonucci ay Juventus ka baxeen ayaa Chelsea xaalada ku sii adkaysay iyada oo maamulka Juvnetus ayna doonayn in xidig kale oo muhiim ahi uu kooxdooda ka baxo inkasta oo ay Blues xidiga ree Brazil ka soo gudbisay dalab lama diidaan ah sida uu wargayska Daily Express shaaca ka qaaday.
Laakiin wargayska Daily Express ayaa sheegay in Chelsea ay war fiican ka heshay xiisaha ay u qabto badalka Alex Sandro ee Danilo kaas oo ay 26 milyan oo gini oo kaliya kaga doonayso Real Madrid. Chelsea ayaa markii ay xaalada Alex Sandro noqotay mid aan horumar laga samayn waxay barbar waday qorshe ay Danilo kagala soo wareegayso Real Madrid.
Antonio Conte ayaa ilaa hadda sameeyay saxiix muhiim ah oo kaliya waana Antonio Rudiger oo ay Chelsea kala soo saxiixatay kooxda AS Roma waxayna hadda u muuqataa in markale uu Conte badali doono bartilmaameedkii muhiimka ahaa ee Alex Sandro kaas oo ay Juventus u soo bandhigayso heshiis cusub oo mushaarkiisa usbuucii lagu laba jibaarayo.
Alex Sandro ayaa hadda usbuucii Juventus mushaar ahaan uga qaata £117,000 gini waxaana loo balan qaadayaa in mushaarkiisan loo laba jibaari doono haddii uu kooxda ku sii nagaado. Xidiga ree Brazil ayaan soo dhex galin wada xaajoodka labada kooxood taas oo Juventus siinaysa fursad ay Blues isaga caabiso.
Dhinaca kale Juventus ayaa xiiso u qabta xidiga Antonio Conte uu kooxdiisa ka takooray ee Matic balse xaalada aan fiicnayn ee labada kooxood ku dhex martay heshiiska Alex Sandro ayaa keeni karta in Blues ay markeeda xaalada ku adkayso Old Lady.
Dhibta suuqa ee Conte waxaa u dheer in Costa iyo Matic ayna kooxda Blues ula safri doonin barri fog waxayna sugayaan inta ay helayaan koox ay ku biiraan iyada oo Matic loo diiday in uu Man United u wareego.Chelsea ayaa wali laga sugayaa in ay dhamaystirto heshiiska Bakayoko kaas oo laga walwalsan yahay haddii uu tijaabada caafimaadka Blues ku baasay.